संकटाको ह्याट्रिक यात्रामा आर्मी बाधक बन्न सक्ला ? | Hamro Khelkud
संकटाको ह्याट्रिक यात्रामा आर्मी बाधक बन्न सक्ला ?
प्रकाश तिमल्सिना /दिपक न्यौपाने
बुटवल– विभागिय टोली लगातार दोस्रो बर्ष तिलोत्तमा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल्ने तयारीमा छ । गत बर्ष आयोजक अग्नी रुपन्देही ११ सँग फाइनलमा ३–१ ले पराजित आर्मीले यसपटक आयोजक टोलीलाई सेमिफाइनलमै राकेर अघि बढेको थियो ।
आयोजकलाई पार लगाउँदै अघि बढेपनि आर्मीलाई केही दबाब भने पक्कै हुनेछ । कारण फाइनलमा यसपटक प्रतिद्वन्द्विका रुपमा अर्को ए डिभिजन टोली सिएमजी क्लब संकटा रहेको छ । संकटा त्यहि टोली हो जसले बर्षका दुई उपाधि जित्दा दुवै पटक आर्मीलाई नै निराश पारेको थियो । संकटाले चितवनमा विकास रनिङ शिल्ड र रुस्लान सिमरा गोल्ड कप जित्दा आर्मीलाई नै हराएको थियो ।
यो बर्ष संकटा पाँचौं फाइनल खेल्ने तयारीमा छ । सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकप र बुढासुब्बा रेडबुल गोल्डकपको फाइनलमा भने संकटा पराजित भएको थियो । यो बर्ष आर्मीसँगका चार भेटमा दुई फाइनलसहित ३ खेलमा संकटा विजयी भएको थियो भने एक खेलमा मात्र आर्मी विजयी भएको थियो । टुबोर्ग हेटौडा गोल्डकपमा च्याम्पियन बन्ने क्रममा आर्मीले संकटालाई पहिलो खेलमै निराश पारेको थियो । संकटासँगको नतिजा सन्तोषजनक नभएपनि आर्मी यो बर्ष उच्च प्रदर्शन गर्ने टोलीमा पर्दछ । चितवनमै नेपाल कप जितेको आर्मीले दुहबी गोल्डकप र टुबोर्ग हेटौडा गोल्डकप जितेको थियो ।
तिलोत्तमा गोल्डकप आर्मीको यो बर्षको सातौं फाइनल हो । संकटासँगको हारको बदला लिदै आर्मी च्याम्पियन बन्ला वा आर्मीलाई नै हराउँदै संकटाले उपाधिमा ह्याट्रिक गर्ला शनिबार साँझसम्म त्यसको झिनोफानो हुनेछ । यहाँ भने आर्मी भारतको युनाइटेड सिक्किमलाई ८–० ले हराउँदै यात्रा सुरु गरेको थियो भने क्वार्टरफाइनलमा अर्को विभागिय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई ३–१ ले निराश पारेको थियो । अग्नी रुपन्देहीलाई हराउन भने आर्मीले टाइब्रेकरसम्म कुर्नुपरेको थियो । क्वार्टरफाइनलमा एपिएफलाई ३–१ ले निराश पारेको संकटाले हिमालयन शेर्पालाई २–१ ले हराउँदै फाइनल पुगेको थियो ।
मोसफलकै प्रतिष्ठित गोल्डकप मध्येको एक तिलोत्तमा २०३३ सालबाट सुरु भएपनि पटक पटक आर्थिक अभाव र अन्य कारणले रोकिने गथ्र्यो । गत बर्षबाट प्रतियोगिताले पुनः निरन्तरता पाएको छ । यसपटक प्रतियोगितालाई अग्नी सिमेन्टले मुख्य प्रायोजन गरेको छ । बुटवल उप महानगरपालिकाको संरक्षणमा संचालन हुने प्रतियोगितालाई करेन्ट मसला र हुवाइ मोबाइल सहयोग प्रायोजन गरेका छन् । त्यस्तै अखिल नेपाल फुटबल सघं (एन्फा), राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) र रुपन्देही जिल्ला विकास समिति प्रतियोगिताको विशेष सहयोगीका रुपमा रहेका छन् ।
तिलोत्तमा गोल्डकपको विजेता टोलीले उपाधिसहित ५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।